सशस्त्र प्रहरीको राशन भत्तामा चरम अनियमितता, तालिम केन्द्रहरुमा बेथिति | Online Nepal
सशस्त्र प्रहरीको राशन भत्तामा चरम अनियमितता, तालिम केन्द्रहरुमा बेथिति
मंगलबार, बैशाख १४ २०७८
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रहरुमा राशन भत्ताको अनियमितताले सीमा नाघेको छ । विदामा बसेको बेलाको समेत सशस्त्र प्रहरीहरुले रासनको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तालिमका प्रशिक्षार्थीहरूलाइ बिदा छोडेर राशनको पैसा लिने प्रवृत्ति सशस्त्र प्रहरीका सबै जसो तालिम केन्द्रमा छ । तालिमको बीचमा बाहिरी अभ्यास सकेर प्रशिक्षार्थाीलाई एक देखि डेढ हप्तासम्म बिदा छोडिन्छ । तर, प्रशिक्षार्थीले भने त्यसरी बिदामा बसेको दिनको समेत राशनको पुरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तालिममा पछाडि पारिदिने तथा नियतवश दुःख पाइने डरले यस्तो अनियमिततामा कोही पनि बोल्न नसक्ने अवस्था छ ।
यो समस्या मातातिर्थको सशस्त्र प्रहरीको एकेडेमीदेखि सबै तालिम केन्द्रमा छ । पोखराको लामापाटनस्थित तालिम केन्द्र, नवलपरासीको बर्दघाट, बाँकेको नौबस्तालगायत सबै तालिम केन्द्रका हाकिमहरु तल्लो तहका प्रहरीको राशनभत्ता खाने गरेका छन् । अझ ककनीस्थित युनएन तालिम केन्द्रका प्रमुख एसएसी भेष बहादुर शाहले त केही दिन अघि आफ्नो २५औं बैबाहिक बर्षगांठ तालिमकेन्द्र भित्रै मनाए । राशनकै पैसाले तालिम केन्द्रमा उनले पार्टी गरेको स्रोत बताउँछ ।
उता, राशनमा ब्यापक अनियमितता गरेका मनाङस्थित गुल्मका डिएसपी होमनाथ पन्थीले उन्मुक्ति पाएका छन् । छानबिनका लागि मुख्यालय तानिए पनि उनी पुनः गुल्म फर्किएका छन । अनियमिततामा संलग्नहरुलाई मुख्यालयबाट निगरानी र कारवाही नहुँदा तालिम केन्द्रहरुमा बेथिति बढेको हो ।
त्यस्तै सशस्त्रको रक्तकाली गण सुर्खेतका गणपति एसपी दिग्बिजय सुवेदी विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । सुर्खेतका एसपी सुवेदीमाथि बाहिनीमा समेत उजुरी परे पनि डिआइजी अभि खत्रीले उल्टो संरक्षण गरेका छन् । एसपी सुवेदी यसअघि बारामा हुँदा कारबाहीमा परेका थिए । दृष्‍टि साप्ताहिकमा खबर छ।
नयाँ गृहमन्त्रीको नाममा सरुवामा चलखेल गर्दै सशस्त्रका आईजीपी
सशस्त्रका १५ डीएसपीको एसपीमा बढुवा (नामसहित)
सशस्त्रका असई/सईदेखि डीआईजीसम्मको बढुवामा आईजीपी खनालकै अबरोध
सशस्त्र प्रहरीका यी एसएसपीहरु बढुवाबाट बन्चित
सशस्त्र प्रहरीले गर्‍यो साहसिक काम, कमला नदिको बीच टापुमा फसेका तीन जनाको उद्वार
सशस्त्र प्रहरीमा सईमा प्रवेश गरेका प्राविधिकहरु डीआईजी बन्ने
मन्त्रिपरिषदको माइन्युट नै सच्याएर मुख्यसचिवले सशस्त्रका डिआईजी श्रेष्ठको म्याद थपे !
सशस्त्र प्रहरीका ५३१ जना सहायक हवल्दारको हवल्दारमा बढुवा (नामावलीसहित)
भारतीय दुताबास धाउने डिआईजीको म्याद थप गराउन आईजीपी नै सक्रिय !
लडाकु दस्ता खोलेर भिडन्ततर्फ जाँदै एमालेका नेताहरु ,कहाँबाट आउँछ खर्चको स्रोत ?
बालुवाटारमा ओलीको खाजा खर्च वर्षको ४ करोड !
कौशीबाट तथानाम भनेर कुर्लिएपछि कोठामा बात मार्नुको के अर्थ रह्यो र ?
डीआइजीको दौडमा रहेका एसएसपीमाथि उजुरी
आफन्तलाई पोस्न गृहसचिवले रोके २५ जना एसपीको बढुवा, सशस्त्रका आईजीपीमाथि दवाव